novembre 2016 - Page 25 sur 25 -
Hisy indray ny hetsika hotanterahin’ireo mpanao politika any Soamahamanina ny alatsinainy izao. Noho ny fanafarana mpanao gazety avy any ivelany no antony hanatanterahana ny hetsika raha ny nambaran’ireo mpikarakara. Mpanao gazety tsy fantatra hoe iza …Tohiny
Ao anatin’ny telo volana fahatelo tanteraka ny taom-pianarana amin’izao fotoana izao. Fotoana hamitana ny fandaharam-pianarana sy hanaovana famerenana. Izany hoe, fotoana tena saropady ho an’ny sehatry ny fampianarana. Rehefa migadona ihany koa ity telo volana ...Tohiny